i-virgin mobile usa ukwethula okungenamkhawulo kwe-4g wimax hotspot & dongle may 31
none Izindaba Nokubuyekezwa IVirgin Mobile USA yethula i-4G WiMax Hotspot neDongle engenamkhawulo ngoMeyi 31
IVirgin Mobile USA yethula i-4G WiMax Hotspot neDongle engenamkhawulo ngoMeyi 31
Sithathe kabili lapho sibona lezi zindaba. IVirgin Mobile USA imemezele ukuthi izoletha ukufinyelela kwe-inthanethi okungenamkhawulo kwe-4G kumakhasimende ayo ngemali ephansi engama- $ 35 ngenyanga, ngentambo ezimbalwa kakhulu ezinamathiselwe.
Phambilini, iVirgin Mobile ibike yanikela ngeNovatel 2200 hotspot enedatha engenamkhawulo yemali ephansi yanyanga zonke ngaphandle kwenkontileka. Okubi kakhulu ukuthi kwakusebenza kunethiwekhi ye-Sprint & apos; s EVDO, egijima ngokwesilinganiso esingu-800kbps, i-broadband encane uma iqhathaniswa nomncintiswano. Manje iVirgin ihlela ukunikela nge-Overdrive Pro 3G 4G hotspot, kanye ne-U600 3G 4G USB stick. Amadivayisi womabili azotholakala ngoMeyi 31, futhi azobizwa ngentengo engu- $ 149 nge-Overdrive Pro hotspot, kanye ne- $ 99 ngenduku ye-U600 USB.
Njengoba iVirgin Mobile imemezele ukuthi babe yi-apos; d ihlinzeka nge-HTC Evo V 4G besibambe umoya wethu ukuthola isixazululo se-broadband yeselula futhi, futhi manje iVirgin iyakwenza. Eceleni kwamadivayisi, kuzoba nezinhlelo ezimbili zamanani ezinikezwayo. Hlela okukodwa, ngo- $ 35 ngenyanga, umsebenzisi uthola ama-gigabytes ama-2 wedatha ye-3G, kanye 'nedatha engenamkhawulo ye-4G.' IVirgin iphawula ukuthi okungenamkhawulo ngama-gigabyte ayi-10 we-WiMax engafakwanga, bese kuthi ukuqubuzana kukhahlele isikhathi esisele sohlelo. Hlela amabili, ngo- $ 55 ngenyanga, uthola umsebenzisi ama-gigabytes ama-5 wedatha ye-3G, ne-4G efanayo engenamkhawulo nokuphrinta okuhle okungenhla.
Kunemigede embalwa kuhlelo olungenza lokhu kunikezwa kube ngaphansi kokulungele abanye abantu. Ngenkathi i-4G yinhle, qiniseka ukubheka imephu yokumboza njengoba iVirgin Mobile isebenzisa inethiwekhi ye-WiMax ye-Clear & apos, ngakho-ke kubalulekile ukuthi wazi ukuthi isebenza kuphi nokuthi ayisebenzi kuphi. Ikhasimende elifanele lalo mkhiqizo kuzoba ngumuntu ohlala futhi ohamba ngaphakathi kwendawo yokumboza ye-4G, ngoba i- $ 35 ye-4G ye-WiMax engenamkhawulo iyisivumelwano se-screamin! Kulabo abavamise ukuya ezindaweni ezingakatholakali nge-4G WiMax, kuzofanele unqume ukuthi ngabe uhlelo lwe-2GB noma lwe-5GB luzifanela kangcono izidingo zakho ngoba uzokhawulelwa kulawo mabhakede uma ungekho ku-4G footprint. Njenganoma yikuphi ukunyuswa kweVirgin Mobile, ungashintsha amapulani noma ukhansele nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwenhlawulo, ngakho-ke asiboni okubi kakhulu.
Kuzoba mnandi ukubona ukuthi lokhu kunomthelela muni emakethe ye-broadband e-US. IVirgin Mobile imemezele ukuthi yomibili imikhiqizo emisha ye-4G broadband izomakethwa ngaphansi kwegama layo lomkhiqizo weBroadband2Go, futhi womabili amadivayisi azotholakala ku-inthanethi nasezitolo ngoMeyi 31.
umthombo: IVirgin Mobile USA
I-Overdrive Pro U600
isusa izinhlelo zokusebenza ku-google play
I-Sprint iqala uhlelo lokuqashisa lwe-Galaxy Forever ngomphetho we-S7 no-S7
I-Shocker: Ukuhlangana okukhulu kwe-5G phakathi kwe-T-Mobile ne-Sprint kuholela ekulahlekelweni okukhulu kwemisebenzi
Uhlelo lokusebenza luvumela abantu ongabazi ngokuphelele ukuthi bakushayele futhi bavuse wena esikhundleni sewashi le-alamu
Imidlalo eyi-10 ehamba phambili yebhola / yebhola ye-Android ne-iOS
Amacala wesikhumba amahle kakhulu we-Samsung Galaxy S8 ne-S8 +
Nakhu ukuthi kungani i-Pink Floyd & apos; s Dark Side of the Moon izwakala kangcono manje ku-YouTube Music ye-Android
Ubuwazi - ukususa ibhethri lefoni yakho ukuphela kwendlela eqinisekile yokuyivimba ukuthi ingalandelelwa
Umbiko uthi ukwethulwa kweBeats Studio Buds kuseduze
IPixel 2 nePixel 2 XL vs iPhone 8 ne-iPhone 8 Plus: ukuqhathanisa kwama-specs
AbakwaSamsung & apos; s Galaxy Tab S6 Lite maphakathi nomqaphi uyathengiswa ngentengo engehlulwa